Xiisadda Gacanka Kuuriya iyo mowqifka Shiinaha haddii dagaal dhaco – Kasmo Newspaper
Xiisadda Gacanka Kuuriya iyo mowqifka Shiinaha haddii dagaal dhaco
Updated - August 12, 2017 6:54 pm GMT
London (Kasmo), Xiisadda Gacanka kuuriya waa sii xumaanaysaa, hanjabaadaha Donald Trump iyo Kim Jong-Un is dhaafsanayaanna waxay qaateen bogagga hore ee Wargaysyada Caalamka. Xaaladda 2da dhinac ka abuurantay waa mid ay ku dheehantahay daandaansi an horey loo arag, isla markaana lahayn qaab cad oo loo tixraaco.
Waxaa la is weydiinayaa tolow dagaal ma dhici doonaa? Shiinuhuna waxay la tahay in xiisadda hadda ka taagan Kuuriya gaari karto meel adag oo midkoodna Trump iyo Jong-Un ka soo laaban Karin. Waxaa markaas xigi doona tillaabooyin is xiga oo falcelin ah kuna fadhiya is fahan-waa iyo fasirasho khaldan oo shidi doona dhimbisha qarsoon ee dab weyn oo iskiis u holci doona.
Tifaftire Yang Yang oo wax ku qora Wargayska Global Times qaybtiisa afka Shiinaha “Huanqiu Shibao” ee Arrimaha Dibadda u falanqeeya Xisbiga Shuuciga, waxay la tahay in mowqifka Shiina hadba cidda dagaalka bilowda ku xirnaan doono.
Haddii Kuuriya ku horreyso duqaynta Maraykanka, Shiinuhu dhexdhexaad ayay ka noqon doonaan dagaalka, haddiise Maraykanku isku deyo in uu afgambiyo Rejiimka Jong-Un, Shiina waa soo galaysaa dagaalka.
Shiina waxaa kale oo ay xoojinaysaa iskaashiga kala dhexeeya Russiya oo iyadu qudheeda doonaysa xal an dagaak ahayn in loo helo mashkiladda Kuuriya, laakiin haddii xiisaddu gaarto heer ay wax u dhimi karto danaha iyo nabadgalyada Russiya iyo Shiina, 2da dal ma ahaan doonaan kuwo iska daawada, ayuu qoray Yang Yang.
In kasta oo lafagurayaal badani dagaal qarxa la tahay sheeko fog, dhibta runta ah ee jirta ma ahan suuragalnimada dagaalka ee waa ujeeddooyinka kala duwan ee Washington iyo Pyong Yang.
Kuuriya waxay hanjabaadaha uga jeeddaa sidii Maraykanka ay ugu khasbi lahayd in uu galo wada-xaajood dhab ah oo ku saabsan nabaddii hakatay 1953kii. Maraykankuna wuxuu uga danleeyahay sidii uu u qabsan lahaa Kuuriyada Woqooyi ama ugu baddeli lahaa Rejiimka Jong-Un xukuumad isaga taabacsan.
Labadooduse waxay garwaaqsanyihiin sida ujeeddooyinkoodu u yihiin qaar ay adagtahay in la hirgaliyo, sidaa darteed midba midka kale ayuu doonayaa in uu ka yaabsado, laakiin midkoodna ma bilaabi doono tillaabada hore ee dagaalka.
Lu Chao oo khabiir ku ah xiriirka Kuuriya/Shiina, kana tirsan Kulliyadda Aqoonta Bulshada “Liaoning Academy of Social Sciences” ee magaalada Shenyang, waxay la tahay in daandaansiga joogtada ah ee tijaabooyinka Kuuriyada Woqooyi ayan caawinayn wadahadalladii nabadda.
Sidoo kale Dhoollatusyada Militari ee Maraykanka iyo Kuuriyada Koofureed iyaguna ka joojin karayn Pyong Yang samaynta gantaallo cusub iyo tijaabooyin kale.